CINABYADA MERLOT: SHARAXAADA KALA DUWAN, SIFOOYINKA IYO ASTAAMAHA, CUDURRADA IYO XAKAMAYNTA CAYAYAANKA, SAWIR - BEERTA
Handsome Bordeaux - canab Merlot
Canabka Merlot ayaa ka mid ah kuwa ugu badan ee la raadsado kadibna caan ku ah winemaking. Maanta waxaa loo qaybiyaa adduunka oo dhan. Horumarinta dalal leh jawi ku habboon: guriga dhexdiisa - Faransiiska, oo ku nool dalalka Talyaaniga iyo Spain, Portugal.
Laga soo bilaabo goobaha cimilada ee Russia, halkaas oo ay isku dayeen in ay soo saaraan kala duwan ee Merlot, waxay u koraan ugu fiican ee Krasnodar Territory.
In Ukraine, gobolka Odessa, iyo Moldova sanad walba goosashada qani ku ah kala duwan ee this soo ururiyey. Wadamada kale ee Merlot ay si gaar ah u caan baxeen, waxaa lagama maarmaan ah inay magaca Croatia iyo Montenegro, xeebaha Mediterranean ee Algeria, iyo sidoo kale USA (California) iyo Chile. Canabka "Merlot" wuxuu ka tirsan yahay noocyada galbeedka Yurub.
Cinabta Merlot: sharaxaad kala duwan
"Merlot" waa noocyo kala duwan oo canab ah, taas oo ah, waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo miraayado kala duwan. Waa la cuni karaa mid cusub, laakiin lama saari karo noocyada miiska: maqaarka waxaa loo tixgeliyaa mid aad u cufan, dhadhanka dabeecadiisu maaha qof kasta, iyo dadka qaarkood waxay keenaan dibnaha qalalan iyo dhirta.
Waxaa ka mid ah noocyada farsamada ee qiimeynaya sidoo kale Levokumsky, Bianka iyo August.
Magaca Merlot waxaa lagu turjumi karaa ereyga Faransiiska "Merle" - "blackbird".
Waxaa macquul ah, in canabkuna uu magaciisa helo sababtoo ah midabka iyo riwaayadaha berry waa kuwo aad u la mid ah midabka dusha ama indhaha shimbiraha caadiga ah. Qormo kale waa sababta oo ah madaweynaha madow ayaa aad u jecel yahay canabka of kala duwan oo ka door bidey dadka kale.
Berry wuxuu ku wareegsan yahay qaab, buluug madow ama ku dhowaad madow, aad u casiir leh, oo soo uruuriyay koox weyn. Beerta la gooyey waxaa lagu daboolaa lakac lakac iftiin ah oo khafiif ah, naxaas leh. Casiirka waa mid aan midab lahayn.
Midhaha mugdiga ahi waxay leeyihiin Athos, Moldova iyo Delight Black.
In berry ka mid ah ilaa saddex abuur (abuur).
Nooca sanduuqa waa konik ama cylindro-conical, cufnaanta waa celcelis ahaan. Kooxo waaweyn ayaa inta badan leh laan dhinac - garabka. Celceliska dhererka iyo miisaanka - 15-17 cm iyo 120-150 garaam siday u kala horreeyaan.
Caleemaha waa qaab kakan, qaab qurux leh oo shanleyn leh, oo leh qoryaha yar-yar ama jeex-jajabka ee u dhow jarista. Midabku waa cagaar mugdi ah, badanaana leh garaafyo iftiin leh. Dusha sare ee xaashida waa wax yar oo adag, oo leh xidid adag oo xididdada. In dhibco guduud xilliga dayrta muuqan on caleemaha hurdi. Qeybta sare ee xaashida waxay ka kooban tahay taxane ah saddex iligood oo yaryar ah, fiiqan ama wareegsan. Qaybta hoose ee caleemaha yar yar ayaa loo yaqaan 'pubescent'.
On sawiro hoos ku qoran waxaad arki kartaa muuqaalka ka mid ah Canabka Mirlot:
Waddanka noocyo kala duwan waa beeraha Bordeaux oo leh xaalado cimilo heer sare ah.
Iyada oo ku saleysan cilmi baaris DNA, waxaa la aasaasay in "waalidiinta" ee kala duwan ee Merlot ay yihiin canabta Cabernet Franc (fr. Faransiis Cabernet) iyo Madeleine Noir de Charente (Fr. Magdeleine noire des Charentes).
Si ka duwan kii ugu caansanaa "aabaha", kala duwanaanta Cabernet Franc, "hooyada" ee "Merlot" kala duwan ayaa laga helay 1992-kii. Tani waxay ahayd nooc ka mid ah dareenka: ka dib oo dhan, qaybta waqooyiga ee Brittany, halkaas oo ay ka heleen noocyo kala duwan oo canab ah oo aan weli la aqoon ee sayniska, looguma tixgelin gobolka gobolka winemaking. Si kastaba ha noqotee, canabkani si wanaagsan ayaa loo yaqaan dadweynaha. Waxa hore u ruxday, 22-kii Luulyo, maalintii Maryan Magdalene, oo waxay heshay magac si sharaf leh.
Bandhigyadan kala duwan caabbinta dhaxan dhexdhexaad ah iyo waxay u nugul yihiin la'aanta qoyaan. Sannadaha qalalan waxay u baahan yihiin waraabin dheeri ah.
Waraabin dheeraad ah ayaa sidoo kale lagu jecel yahay Xasuusta Negrul, Romeo iyo Gordey.
Kala duwanaanshaha "Merlot" kala duwan ayaa ah:
ee miisaska miiska - 152 maalmood;
for khamriga macmacaanka - 164 maalmood.
Celcelis ahaan dhalid Canabka Merlot ayaa lagu qiyaasay 47 senteemer / ha, ugu badnaan - 57 kg / ha. Cuntada waxaa loo tixgeliyaa inay sarreeyso oo xasilloon, laakiin tirooyinka dhabta ah way ka duwan yihiin marka ay timaado gobollo kala duwan.
Isu-soo-ururintu waxay dhacaysaa Sebtembar ama Oktoobar, waxay aad ugu xiran tahay cimilada gobolka oo dhan iyo cimilada xagaaga iyo dayrta.
Si aan u seegin daqiiqad marka cawska u bislaaday ay ku habboon yihiin winemaking, waa caado ah in ay dhadhamaan canab maalmood ee ugu horreeya September. Waxaa lagu ururiyaa marxaladaha, sida daaqa.
Cudurada iyo xakamaynta xakamaynta
Cinabka Merlot waa kuwo u adkaysta caarada iyo jeexjeexa berry. Nasiib darro, waxaa si xun u waxyeeleeyay cudur kale oo la yaqaan - oidiyoon.
Si looga hortago tan cudurka fungal marka la beerto canabku waxay tixgelinayaan iftiinka iyo jihada dabaysha. Safarku waa ujeeddo si ay dhammaan duurka u yihiin si siman u wanaagsan hawo. Meelaha dhererka ah: 3.5 x 1.5 m ama 4.0 x 2.0 m.
Waxaa muhiim ah in la isticmaalo xooraha kuwaas oo bixiya nalal wanaagsan iyo hawo qabasho geedka oo dhan. Waxaa lagama maarmaan ah in la dabciyo ciidda waqtigeeda iyo in aan lagu xadgudbin bacriminta macdanta nitrogen.
Dagaal oidiyoon bilaabmaa guga hore, ka hor inta aan ubbooyinku Bloom. Geedaha waxaa lagu buufiyaa lakab-sulfur-sulfur, waxay noqon kartaa xal DNOC (labadaba labadaba 1-2%).
Xilliga gu'ga iyo xilliga kuleylka, buufinta suntan ayaa la adeegsadaa. Cunto noocan oo kale ah waxaa lagama maarmaan ah ka hor inta aan la bilaabin canab ubax. Xilliga hawada kulul, buufinta waxaa lagu bedeli karaa wasakheynta sulfur dhulka (oo la sameeyo subaxa ama fiidkii).
Saameynta diyaarinta baaruuddu waxay socotaa wax aan ka badnayn 10-15 maalmood, kadib roobab culus waa in la daaweeyo.
Diyaarinta Sulfur ayaa dhameysatay codsigii 55-60 maalmood ka hor intaan la goyn.
Waxyeello maaha in la qaato tallaabooyin ka hortag ah oo ka dhan ah anthracnosis, chlorosis, bakteeriyada iyo rubella, kuwaas oo ah cudurada sabiibta ee caadiga ah.
Iyada oo ku saleysan casiir ka mid ah canab ah "Merlot" samayso noocyo badan oo miis fadhiya iyo khamri macaan oo tayo sare leh. Canab "Merlot" waxaa loo yaqaanaa maqaarka khafiifka ah marka loo eego noocyo kale oo canab ah oo madow, waxoogaa yar ayaa ku xiran. tannins. Khamriga ayaa ka soo riixaya si ka dhaqso badan kuwa kale. Waxay kala soocaan midabkooda hodanka ah, bouquet aan caadi ahayn, qaab dhismeedka hodanka ah iyo dhadhan wanaagsan.
Sanadaha qaboobaha, Merlot waxay ka fiican tahay "tartanka ugu dhow" - Cabernet Sauvignon kala duwan, iyo sanadaha kulul waxaa ku jira sonkor badan.
Merlot iyo Cabernet Sauvignon - laba nooc oo canab ah, oo ah kuwa ugu caansan dunida oo dhan. Meel kasta, halkaas oo noocyada kala duwan ee la kobciyo "Merlot", laga bilaabo waxay helayaan lafaha cas ama casaan leh dhadhan gaar ah iyo caraf udgoon.
Noocyada "Wine" ayaa si caadi ah loo tixgalinayaa inay yihiin Rkatsitic, White Muscat, Chardonnay iyo Tempranillo.
Gacaliye qaali ah! Ka soo tag fikradahaaga ku saabsan noocyada kala duwan ee canabka Merlot ee faallooyinka hoos ku qoran.